Iswaydiinta Mashaariico Badan Oo Heshiiskii Dp-world Iyo S/land Wada Galeen Oo Haatan Muuqan | Marsa News
Iswaydiinta Mashaariico Badan Oo Heshiiskii Dp-world Iyo S/land Wada Galeen Oo Haatan Muuqan
October 15, 2018 - Written by editor marsan
Aniga oo baleysin iyo bud-dhig laygu garaabo uga dhigaaya hadaladii iyo hawraarihii aan mariibneyn ee maalmahan loo adeegsaday dhagax-dhigidii Dekeda cusub ee Berbera , aniga oo weliba tix-raacaya tixdii iyo tiraabtii mikirifoonada lagaga adimey waqtigii xukuumadii hore ee Kulmiye kuna yar bishilaaya dhamaan keydka qoraal ama rikoodh ee loo guntay Mashruuca Wareejinta Dekeda Berbera ee Geed Sare Waabka noqday, Waxaan Shacabka Somalilaan u iftiiminayaa in is-fahankii ku saabsanaa Wareejinta Dekeda Berbera ee ay Xukuumadda iyo Shirkada DPW isla qaateen sanadkii 9/5/16 uu ahaa sidan hoose:
B) Maadaama marka Dekeda la balaadhiyo loo baahan yahay wadooyin waaweyn oo ganacsiga fududeeya waxaa heshiishka ku jirtay in la dhisi doono wadada isku xidhi doonta itoobiya iyo Berbera oo ah (Jidkii rajada ee Berbera Corridor ) Wadadaa weli ummadda looma soo bandhigin waqtiga la bilaabi doono ee dubaha lagu dhufan doono in kasta oo ilaa iyo 3-dii sanadood ee la soo dhaafay Xukuumadu carabka ummadda ugu celcelisey oo lagu canqarinaayey in sanad kasta, sanadka danbe la dhisi doono, ilaa iyo maantana waa sidii xaalku oo waxba ismay bedelin.
C) Waxaynu wada ognahay in imaaraadka iyo Xulafadiisa Carbeed ay Madaarkii Berbera Saldhig Ciidan ka dhiganayaan waxaana heshiiska ku jiray in ay DPW ka dhisi doonto magaalada Berbera Madaar cusub oo Caalami ah maadaama ay iyagu madaarkii magaalada la wareegeen oo Saldhig ciidan ka dhigteen ilaa iyo maatana lama sheegin waqtiga Madaarka Berbera la dhisi doono ?
D) Heshiiska is fahanka ah ee labada dhinac ee DPW iyo JSL wuxuu leeyahay- Waxaa dib uhabeyn iyo qalabeyn mug leh lagu sameyn doona Dekedii hore ee Berbera – Waxaana la keeni doona Dekedii hore ee Berbera 3 Wiish oo Alaabta dejiya (3 Mobile Cranes) 5 Wiish oo raseeyayaal ah (5 reach stackers) 3 Tareele oo kontaynarada qaada (3 empty carriers) Waxaana la dhisi doonaa Xaydaab cusub iyo Xakame sugidoona nabadgelyada Dekeda (New Security system) taas oo dekedu ku shaqeyn doonta kuna qalabeysnaan doonta cilmiga cusub ee kumbuyuuterka iyo CCTV.
Wuxuu heshiisku cadeynayaa in Wejigani uu ku kacaayo lacag gaadhaysa $62 Million oo Dollar. Waxaa ilaa hada wejigaa ka hirgalay ama laga hayaa dhowr wiish oo baali ah oo Dekeda Jabal ali ee UAE laga keenay oo keliya taasina waxay kuu cadeynaysaa in aanay xukuumadu dabo gal adag ku sameyn sidii uu u fuli lahaa heshiiskaasi loona ogaan lahaa Qalabkii lagu heshiiyey inta la keenay iyo inta dhiman?
E)- Waxaa heshiiska ku jirtay in Wejiga 1-aad ee balaadhinta Dekedii hore ee Berbera lagu kordhin doono Deked yar oo cusub oo 400 Mitir iyo 25 Yard ah oo ay ku soo xidhan karaan ilaa iyo 3 Markab. Waxaana ay dekedani noqon doontaa mid ah ( Container Terminal ) Waxaa kale oo wejigan la socda ayuu heshiisku leeyahay in la keenaayo Dekeda Berbera 7 Wiish oo ah kuwa casriga ah ee qaada isla markaana raseeya kontaynarada (7 Rubber tired Gartry Cranes). Waxaa wejigan lagu maalgelin doonaa lacag gaadhaysa ilaa $170 Million oo Dollar. Hadaba dhawaan markii la dhagax dhigaayey Dekedan Shacabka Somalilaan looma sheegin Waqtiga dhismaha la bilaabi doona ee dubaha lagu dhufanaayo? Waana wax lala yaabo in ummadda loo sheegi waayo waqtiga runta ah ee mashaariicdani dalka ka hirgeli doonaan.
F) – Wejiga 2-aad Wijigani wuxuu qeexayaa in hirgelintiisu ay ku xidhan tahay mar kasta sida ay u shaqeeyaan labada weji ee hore. Wuxuu wejigani qeexayaa in marka Dekeda wax soo saarkeedu gaadho ilaa iyo 75% ay markaa hirgelinayaan Wejiga 2aad, Taa soo Dekeda lagu sii kordhin doono mar labaad 400 Mitir Quay and 25 Yard oo noqonaysa barxad kale oo ay ku soo xidhan karaan ilaa iyo 3 Markab oo kale. Qiimaha uu Wejigan 2aad loo qoondeeyey ee lagu Maalgelin doono ayaa lagu qiyaasay lacag gaadhaysa ilaa iyo $10 Million Dollar.
Guntii iyo Gebo Gebadii qormadan : Danaha isku tolan iskuna qoofalan ee dawladaha imaaraatiga iyo itoobiya ka leeyihiin Dhismaha Marsada Berbera, iyo Saldhiga Ciidamada ee Berbera ayaan ilaa hada u horseedin Shacabka reer Somaliland wax horumar ah oo la taaban karo.
Waxaa shacabka Somaliland garan la yihiin Waxay Dawlada Somaliland Dekeda Berbera iyo Saldhiga madaarka ba ay ku bedelatay ee dhaafsatay?
Waxaa aan muran ka taagnayn oo laysku wada raacsan yahay in hadii aan Madaar la dhisin, oo Wadooyin la dhisin Deked La balaadhiyaa qiimo aanay yeelaneyn. sida uu dhawaan sheegay maareeyaha dekadaha Md, Siciid oo hadal uu warbaahinta ka jeediyay ay ku jirtay dekad la dhisaa macno ma laha hadaan wadadii la dhisayn.